Services – Cherryland Web
domain ဆိုတာက သင့် website နာမည် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဥပမာ – zawzaw[dot]com (.net/.org) စသည်ပါ၊ hosting ဆိုတာကတော့ သင့် domain နဲ့ သင့် website data တွေကို သိမ်းဆည်းပေးထားမယ့် နေရာဖြစ်ပါတယ်၊ domain သက်သက် ဝယ်ယူရုံနဲ့ သင့်အတွက် website တစ်ခု ရရှိမှာပါ၊ hosting ပါ ဝယ်ယူချင်လျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့က ဝန်ဆောင်မှု ပေးမှာပါ။
web mail ဆိုတာကတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင် website နာမည်နဲ့ email လိပ်စာပါ၊ ဥပမာ – owner[at]zawzaw.com ဆိုတာမျိုးပါ၊ website က သင့်အလုပ် သင့်လိုအပ်ချက် စသည်ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ကြော်ငြာပေးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တယ်ဆိုရင် သင့် email က သင့်ကို တခြားလူတွေက အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် သင့်ကိုယ်ပိုင် စာတိုက်ပါ။
Search Engine Optimization လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ Google, Yahoo, Bing စတဲ့ လူသုံးအများဆုံး search engine တွေမှာ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ အမျိုးအစား တူညီသော အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေတဲ့ အခါမှာ သင့် website တွင် ဖော်ပြထားသည်များကို ဦးစားပေး ဖော်ပြအောင် စီမံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကိုလည်း သီးခြားစဉ်းစားနေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။
website ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ web mobile app ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုံခြုံရေးက အရေးပါတယ်ဆိုတာ web development သမားတိုင်း သိရှိကြပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို အလုပ်အပ်သူတွေရဲ့ ဒေတာတွေကို လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ website နဲ့ mobile app တွေရဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းကိုလည်း အပြည့်အဝ တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ကြီးထွား လာတာနဲ့အမျှ Customer တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ တစ်ခါတရံမှာ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို mobile app တစ်ခုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်က အင်တာနက်ရှိမှ ကြည့်လို့ရမှာပါ၊ mobile app ကတော့ အင်တာနက်မရှိပဲ ကြည့်လို့ရနေမှာပါ၊ ပုံမှန်အနေနဲ့တော့ သည်လောက်ထိ လိုအပ်လေ့ မရှိပါဘူး။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သင်သာအတန်အသင့် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဆိုလျှင် facebook page တစ်ခု ရှိပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ၊ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ သင့် facebook page ကို ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး၊ သင့်ဝက်ဆိုက်မှာ တင်သမျှ သင့် facebook page မှာ အလိုအလျှောက် ဖော်ပြပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်မှာ facebook page မရှိဘူးဆိုလျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့က အခမဲ့ ကူညီပေးမှာပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ ဘလော့ဂါတွေ ခေတ်စားနေစဉ်တွင်ပင် Web design နဲ့ Web development ကိုသာ စွဲစွဲလန်းလန်း လုပ်နေခဲ့ကြသည့် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုရဲ့ အွန်လိုင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်လိုက်ပါတယ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံး အရည်​အသွေးတို့နဲ့ အလျင်မြန်ဆုံး ရေးဆွဲပေးနေတာမို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
ဟိုပုံးမြို့၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
Copyright © Cherrylandweb. All rights reserved. | Developed by Cherrylandweb.